‘मिस्टर झोले’ र ‘बटरफ्लाई’ हलमा « Mazzako Online
‘मिस्टर झोले’ र ‘बटरफ्लाई’ हलमा
आज अर्थात शुक्रबारबाट दुई नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । अभिनेता दयाहाङ राई तथा नायिका दीया पुन अभिनित फिल्म ‘मिस्टर झोले’ र नायिका प्रियंका कार्की तथा नायक आर्यन अधिकारी अभिनित फिल्म ‘बटरफ्लाई’ अलनेपाल सार्वजनिक प्रर्दशनमा आएका हुन् । ‘म गाउँदिन अब गीत गजल’ गीतबाट ‘बटरफ्लाई’ ले चर्चा कमाएको छ,भने ‘मिस्टर झोले’ को ‘ओखती’ गीतको पनि उतिक्कै चर्चित छ ।
दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित तथा टेकेन खड्काको निर्माणमा बनेको फिल्म ‘झोले’ को टाईटल प्रयोग गरि टेकेन खड्का प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टले संयुक्त रुपमा ‘मिस्टर झोले’ निर्माण गरेको हो । रौनक बिक्रम कँडेल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मलाई शैलेन्द्र डी. कार्कीले छायांकन गरेका हुन् । रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्ममा दया, दीयासंगै वर्षा राउत, प्रविण खतिवडा, वृद्धि तामाङ लगायतको अभिनय छ ।
यस्तै ओमप्रतिक गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘बटरफ्लाई’ मा आर्यन, प्रियंकासंगै अर्पण थापा, रविन्द्र खड्का, पुरन थापा, सुष्मा कार्की, सुरविर पण्डित लगायतको अभिनय छ । पुष्पान्जली अधिकारी (सखा), रामशरण राना र भुपेन्द्र सुवेदी निर्माता रहेको ‘बटरफ्लाई’ का कार्यकारी निर्माता रमेश प्रजापति हुन् ।